October 2016 – Radio KeyFM
Dowlada Isiolo oo laga Dalbay in ay Taageerto Waxbarashada
31st October 2016	Somali Language 0
Maamulka kowntiga Isiolo ayaa la weydiistay in ay taageero u muujiso waxbarashada kowntiga si kor loogu qaado tayada waxbarasho. Ururka Knut ayaa ka dalbay maamulka in uu dhaqaale ku filan u miisaaniyad gareeyo waxbarashada si heerka waxbarasho loo xajiiyo. Xooghayaha ururka macalimiinta Knut ee Isiolo Dade Boru iyo gudoomiyaha gudiga …
Makueni : Aabe dilay Xaaskiisa iyo Cunug uu dhalay
Qoys ka koobnaa saddex ayaa wada dhintay,kadib markii sayga reerka uu dilay xaaskiisa iyo cunag uu dhalay. Ninka ayaa isaguna is-dilay,sida ay sheegeen dadka dariska la ahaa qoyskaasi. Shilkani ayaa ka dhacay magaalada Waote ee kowntiga Makueni , maalinkii Axada. Dadka dariska ayaa sheegay in ay maqlayeen xaaska oo ku …
Lamu : Dad ka cabsi qaba Duur Joogta
Dadka deegaanka xaaladaha adag ee abaartu ka jirto ayaa waxaa soo wajahay cabsi la xiriirta koroka duur joogta usoo guuraya goobaha ay degen yihiin. Duur joogta ayaa raadinaysa biyo iyo cunto,kadib saamayn adag oo abaartu ay ku yeelatay. Iyaga oo warbaahinta kula hadlayay Witu, Axadii ayay sheegeen in nafsadoodu ay …
Dowlada oo Fasaxday Lacago wax looga qabanayo Abaaraha
Dowlada ayaa sii daysay ilaa Sh5 billion oo shilin oo wax looga qabanayo abaaraha xiligan taagan ee saameeyay kowntiyo kala duwan oo dalka,sida uu sheegay wasiirka dowlad baahinta iyo qorshaynta Mwangi Kiunjuri. Mr Kiunjuri ayaa hadalka ka sheegay xili uu socdaal ku wehelinayay gudiga beeraha,xoolaha iyo kaluunka ee baarlamanka oo …
IS oo sheegatay in ay Weerareen Safaarada Maraykanka ee Nairobi
Sida ay qortay Nation,kooxda la magac baxday dowlada Islaamiga IS ayaa sheegatay masuuliyada weerar mindi oo lagu qaaday askari ciidamada GSU oo ilaalo ka ahaa safaarada Maraykanka ee magaalada Nairobi. Qofka adeegsaday mindida ayaa damcay in uu galo safaarada,Khamiistii,waxaase istaajiyay askariga uu mindida ku dhuftay,kahor inta aan isla goobta ninkaasi …
Gudoomiyaha Gubernatoorayaasha oo ugu baaqay Dowlada Iskaashi ay ka wada yeeshaan Amaanka
29th October 2016	Somali Language 0
Gubernatoorayaasha ayaa doonaya dowlada iskaashi ay ka sameeyaan amaanka si wax looga qabto amni xumida sii kordhaysa ee qaar kamid ah kowntiyada dalka. Gudoomiyaha gubernatoorayaasha Peter Munya ayaa sheegay dowlada in looga baahan yahay dowaldaha kowntiyada in wada shaqayn kala yeelato amaanka si loola dagaalamo argagixisada iyo kuwa kale ee …
Booliska oo Fashiliyay Weerar Burcad kusoo qaaday Xoolo Raacato
Booliska ayaa kahor tagay weerar ay burcada lo’da ku qaaday xoolalay daaqsin u joogay Kerio Valley. Wargayska Nation ayaa qoray in ay ku ogaadeen weerarkaasi in tirada burcada ay ahayd 30 lagu tuhunsan yahay in ay kasoo jeedaan Pokot. Xoola raacatada la weeraray ayaa ahaa Marakwet. Ciidamada amaanka ee lagu …
Itoobiya oo sii daysay Askar Kenyan ah
Ilaa lix askari oo u xirnaa Itoobiya Afartii maalin ee u dambaysay ayaa ugu dambayn lasii daayay. Ciidamada booliska Itoobiya ee saldhigoodu yahay Bubua Police Station ee degmada Jinga Omarate ayaa sii daayay askartaasi Khamiistii. Askartani oo la xiray Axadii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa ku jira taliyaha saldhiga booliska …
Roba oo Baaq u diray Dadka aan Deegaanka ku ahayn Mandera ee la beegsanayay Muddooyinkii u dambeeyay
Gubernatooraha Mandera Ali Roba ayaa ka codsaday dadka aan deegaanka ku ahayn Mandera ee ka yimid kowntiyada kale ee Kenya in aysan hal meel isugu tagin. Roba ayaa sheegay dadka aan deegaan ka ahayn in kunool Mandera in ay gaarayaan ilaa 5,000,uuna ka dalbanayo in ay dhex galaan dadka,inta ay …
Booliska oo baaraya weerar lagu qaaday bas County-ga Wajeer
26th October 2016	Somali Language 0
Booliska ayaa baaraya warar sheegaya in koox hubeysan ay weerar gaadmo ah ku qaadeen bas gudaha County-ga Wajeer. Weerarka la sheegay in habeenkii Talaadada uu ka dhacay inta u dhexeysa Dhilmaanyaaley iyo Fadh-weyn. Rag hubeysan ayaa lagu waramayaa inay rasaas oodda uga qaadeen gaariga, balse lama sheegin in wax khasaare …